INTshinyela (isiXhosa poetry) (Xhosa) – Elex Academic Bookstore
Home › INTshinyela (isiXhosa poetry) (Xhosa)
INTshinyela (isiXhosa poetry) (Xhosa)
R 16595 R 165.95
Default Title - R 165.95 ZAR Quantity
Le mihobe nezibongo zinzame zombhali ekunqwanqwadeni iziphene ezazigquba ingakumbi kwiMpuma Koloni phakathi kweminyaka yowe-1980 ukuya kowe-1990. Ezinye zezibongo zisekelwe phantsi kokuphakelana komhlohli nabafundi ngezimvo kulaa Kholeji yoQeqesho-zititshala, naantsiya ithe zinzi eBhofolo ezinyaweni zentaba yakwaNondyola. Le mihobe nezibongo ingemiba yeziganeko ezaziyingxuba-kaxaka ngelo xesha. Kuloo mothuko umbhali uthabathe usiba kwaze kwaphokoka ke oku kuqulathwe yile ncwadana. Umbhali uquala ngemihotyana emifutshane, emiqolo ilishumi elinesine, waya eyandisa waphela ngemide. Ekugqibeleni kufakelwe uluhlu lwamagama, kumhobe ngamnye, angathi adale ingxaki ekulandeleni intsingiselo yomhobe, kwanikwa iintsingiselo ekugabuleni loo nkungu. Kaloku
abanye abafundi abanzo izichazi-magama zesiXhosa. Elokugqibela phambi kokuba ivulwe, ifundwe le ncwadana, jonga umzobo oseqweqweni lokuqala ngaphandle. Mfundiso ni oyifumana kulo mzobo? Ukuba kusenkungu, funda inkcazo ngokuphathelele kwisi hloko esiphantsi kwesihloko esithi Intshinyela.
Sithanda isiXhosa Boek 3
R 9286 R 92.86 R 12686 R 126.86 Save R 34
Sithanda isiXhosa Book 3
Sithanda isiXhosa Boek 2 Opvoedersgids
R 10000 R 100.00 R 12686 R 126.86 Save R 26
Sithanda isiXhosa: Boek 2
Sithanda isiXhosa Book 2 Facilitator’s Guide
R 10000 R 100.00 R 12500 R 125.00 Save R 25